Banyere Recetín | Ntụziaka
Ntụziaka blọọgụ ebe ị ga - ahụ ọtụtụ usoro izizi maka ụmụaka na ndị na - eto eto, usoro aghụghọ na ozi gbasara ihe niile metụtara ụwa isi nri.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmara maka ihe ọ bụla na - eme n’ụwa esi nri denye aha na akwukwo anyi na email gi, ebe ị ga-enweta ozigbo nri, usoro isi nri na ozi kacha atọ ụtọ.
Kedu ihe anyị na-ekwu maka ya na Recetín?
En Ntụziaka Ga ahụ usoro nri nke izizi, nke abụọ, ndị na - ebido ya, desserts; Ntụziaka sitere n'akụkụ ụwa niile na usoro aghụghọ maka ụmụntakịrị ka ha mụta iri ihe niile.
Isiokwu anyị na-ekwu maka ya na Recetín nwere ike ịchọta ya na ibe peeji nke weebụ.
Anyị na-eche banyere ndị na-agụ ... ọtụtụ
Ntụziaka, na mgbakwunye ịbụ blọọgụ ebe ị nwere ike ịgụ ma mụta maka isi nri esi nri, ọ na-achọkwa ịbụ ụzọ iji nyere ndị na-agụ akwụkwọ anyị aka, ebe ịza ajụjụ ma nyere gị aka mgbe ị na-eke menu maka ụmụntakịrị, mụta aghụghọ iji nwee edozi nri na-ekpori ndụ na kichin. Can nwere ike ịza ajụjụ na mbipụta, zitere anyị ozi, aro, obi abụọ, ịmata ma ọ bụ usoro nri site n'aka anyị mpempe kọntaktị.
Ntuziaka niile dị na Recetin kere anyị ndi otu ederede. Niile bụ ndị siri nri nwere ọtụtụ afọ ahụmahụ na-akwadebe efere emere maka ụmụaka, yabụ na nkwa ahụ bụ ngụkọta maka ndị nne na nna.
Etu esi akpọsa ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ngwaahịa gị na Recetín?
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ngwaahịa gị metụtara ụwa nke isi nri, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị site na nke anyị mpempe kọntaktị anyị ga-aza ngwa ngwa o kwere omume site na atụmatụ mgbasa ozi ahaziri maka ihe ị chọrọ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ Ntụziaka ị nwere ike ime ya site na nke anyị mpempe kọntaktị.